ပှဲတျော | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » ပှဲတျော
Updated: 2016-07-26 14:57
စာဂ အင်တာနေရှင်နယ် မီးပုံးပျံ ပွဲတော်
ဒီမီးပုံးပျံပြိုင်ပွဲကြီးဟာ ကမ္ဘာ့ဒေသအသီး သီး က ကြေးစား ပိုင်းလော့ တွေ က စုစည်း လာရောက်ကျပြီးတော့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကိုရွေးချယ်မယ့် အင်တာနေရှင်နယ် မီးပုံးပျံ ပြိုင်ပွဲကြီး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၀၀ ကျော်ေ...
Updated: 2016-06-30 13:53
ခါဝစခိ ဟော်လိုဝင်း ပါတီ ( သရဲကြီးများ ည ) ခါနဂ၀ ဂျပန်
နိုင်ငံ တွင်း အလွန် နာမည် ကြီး သော ဖန်စီ အ၀တ်အစား နဲ့ စီ တန်းလှည့်လည်ပွဲ ( ခါဝစခိ ဟော်လိုဝင်းပွဲတော်) ၁၉၉၇ ခုနှစ် မှာ ခါဝစခိ မြို့ ရဲ့ ဆွဲဆောင် မှု နဲ့ လုပ်ဆောင် ချက် တို့ ကို တစ် နိုင် င...
Updated: 2016-06-09 11:37
စာဂရဲတိုက် ဟိနပွဲတော် ( သမီး ငယ်လေး တို့ ကို စောက် ရှောက်ရန် ဆုတောင်းပွဲတော်)
၃လပိုင်း ၃ ရက် နေ့ ဟာ ဟိန ပွဲ တော် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ သမီး သငယ်လေး တို့ ရဲ့ကျန်း မာ ရေး နဲ့ ဖွံ့ ဖြိုး ရေး ကို ဆုတောင်း တဲ့ ပွဲ တော်ဖြစ် ပါတယ်။ ၂လပိုင်း ၂၁ရက် နေ့ က နေ ၃ လပိုင်း ၂၂ ရက...
Updated: 2015-06-05 12:54
Updated: 2015-06-05 11:18
Updated: 2015-05-15 17:17